New Normal : Aftermath of COVID- 19
COVID-19 အလွန် မှာ New Normal ဆိုတာ အခု လူတိုင်းကြားနေကြ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ…
ဒီ Pandemic ရောဂါဆိုးကြီးက ကျွန်တော်တို့ဆီက လွယ်လွယ်နဲ့ ထွက်ခွာမသွားဘဲ နဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ ရေရှည်မှာ နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားမှု Life Style အသစ်ကို လက်ခံဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်…
New Normal မှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Daily Life နဲ့ Business အများစုအတွက် ဘာ Impact တွေရှိလာနိုင်လဲ ဆိုတာကို အချက် (၄)ချက်နဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…
ကိုယ်ဟာ Working Professionals ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Business Owner ပဲဖြစ်ဖြစ် အခုအချိန်မှာ Internet Technology ကို လစ်လျူရှုထားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်တော့ပါဘူး…
အရင် အချိန်က online technology တွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစု အတွက် Essential ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ရောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားမှု လျော့ချဖို့၊ ကိုယ်ရဲ့ Customer တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့နှင့် ကိုယ်ရဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ရှေ့ဆက်စီမံခန့်ခွဲဖို့ အတွက် ကတော့ Bridging Online နည်းပညာတွေ မဖြစ်မနေ အသုံးပြုဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပြီ ဖြစ်လာပါတယ်…
Business တစ်ခု အတွက် ကိုယ်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့အတွက် Online Technology တွေဟာ မရှိမဖြစ်အရေးပါလာသလို
Professionals တစ်ယောက်အတွက် လည်း ကိုယ်ရဲ့ အလုပ် Performance နဲ့ Capacity ဟာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ဆက်ပြီး Relevant ဖြစ်နေဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Online နည်းပညာတွေ၊ Social Media Platform တွေနဲ့ Website တွေအကြောင်း မဖြစ်မနေသိရှိဖို့လိုအပ်လာတာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်…
မလေ့လာနိုင် မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဈေးကွက်မှာ online technology ကို adapt လုပ်နိုင်တဲ့ competitors နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့… အချိန်၊ Professionals အချင်းချင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်ရရှိဖို့တွက် ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ ကိုယ်မှာ Modern Technology ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်အောင်မလေ့ကျင့်ထားရင်… သူများနောက်မှာ နောက်ကောက်ကျ ကျန်ခဲ့ဖို့များပါတယ်…
2. Overcrowded Job Market
ဒီ Topic ကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေထက် employee တွေအတွက်ပါ…
COVID-19 ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ အများပြည်သူရဲ့ ကျန်မာရေးတစ်ခုထဲ အပေါ်ပဲသက်ရောက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘဲ… အချိန်အတိုင်းအတာကြာရှည်လာတဲ့ အလျောက်... အလုပ်အကိုင်နဲ့ စားဝတ်နေရေး ရှုထောင့်တွေကိုပါ သက်ရောက်မှုတွေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်…
နိုင်ငံတကာ မှာရှိတဲ့ စီးပွာရေးလုပ်ငန်း အကြီးအသေးတွေက အစ COVID-19 ရဲ့ Impact ကို သိသိသာသာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်… မထင်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ပြိုလဲသွားသလို သူတို့နေရာတွေမှာ လည်း technology giant တွေက နေရာယူဖို့ အသင့်စောင့်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်…
[JC Penney could joinagrowing list of bankruptcies during the coronavirus pandemic
ပြိုလဲသွားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အတူတူ… အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ professionals သန်းပေါင်းများစွာဟာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဈေးကွက်ထဲကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဝင်ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်…
ဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် အခုအချိန်မှာ ရှေ့ဆက်လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးမြှင့် Workforce တွေကို အလွယ်တကူရယူနိုင်မယ် အခွင့်အရေးဖြစ်သလို…
အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ Employee၊ Professionals တွေတင်သာမကဘဲ.. အခုထက်ထိ အလုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Professionals တွေ အတွက်လည်း ကိုယ်ရဲ့ နဂိုရှိရင်းစွဲ Skill Set တွေ Personal Capacity တွေနဲ့ အတူ… ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာ Technology တွေကို မဖြစ်မနေ ထပ်မံလေ့လာသင်ယူဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်…
အရင်လို ကိုယ်ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ Skill set နဲ့ လုံလောက်တယ်.. ကိုယ်ရနေတဲ့ လစာ နဲ့ လုပ်နေရတာလေးနဲ့ ကျေနပ်တယ်ဆိုပြီး ငြိမ်နေလို့ ကိုယ်နေရာကို ကုမ္ပဏီ တခြား ကိုယ်ထက် qualify ဖြစ်တဲ့ Professionals တွေနဲ့ အစားထိုးသွားတော့မ နောင်တရနေလို့တော့ ဘာမှမထူးပါဘူး…
COVID-19 Impact အပြီးမှာ ဆက်လက်လည်ပတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အတွက်ကတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုပြီး တစ်ခုက အသင့်စောင့်ကြိုနေမှာပါ…
အရင်ကထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Operating Expense တွေတက်လာမယ်…
ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲ ဝိုင်းရမယ်…
ရှိနေတဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းနည်းနဲ့ ကိုယ် ထိရောက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်… Information Management technology အသစ်တွေကို Business မှာ တည်ဆောက်ဖို့လိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်..
ဝန်ထမ်းအင်အားလျော့ချဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အတွက်ကလည်း ကူးစက်ရောဂါပြန်ပွားမှုလျော့ချဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Preventive Measure တွေဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်လည်း… ထပ်တိုး expense တွေတက်လာမယ်…
ဒီလို Challenges တွေနဲ့ အတူတူ.. ယူဆောင်လာတာကတော့… တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေပါ…
ကိုယ်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ… အစားထိုး product and service တွေပြိုလဲသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကသာ ဆက်လက်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်း ဆက်ပေးနိုင်ရင်တော့ … ကိုယ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဈေးကွက်ကို အလွယ်တကူ ရယူလိုက်နိုင်သလိုပါပဲ…
ဉပမာ- zoom conferencing software လိုပဲ Social Distancing ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ need ကို ချက်ချင်းဖြည်းဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အတွက် နေချင်းညချင်းမှာပဲ business empire တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသိသာသာ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့… Foodpanda ပါ… အရင်ကသူလိုငါလို တခြား Delivery service တွေနဲ့ အပြိုင်တိုက်နေရတဲ့ အချိန်မှာ သူရဲ့ Free Delivery Service policy ကြောင့် အခုဆို ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး Foodpanda carrier တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ…
2020 ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘွဲ့တွေ အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့တဲ့ အခု အလုပ်အကိုင်နယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်တော့မယ် Fresh Graduate လူငယ်တွေ အတွက် အခုအလို အခြေအနေဟာ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေလို့ ယူဆလို့ရသလို… ကိုယ်ရဲ့ ဘဝ Career လမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာ အုတ်မြစ်ချလိုရမယ့် အခွင့်အရေးလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး…
အပြင်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွေရှားပါးနေတယ်… ကြပ်တည်းနေတယ်… ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် Fresh Graduate တွေ အတွက် က Internship Opportunity တွေကတော့ ပိုလိုတောင် များလာနိုင်ချေရှိပါတယ်… လုပ်ငန်းတွေအတွက် လည်း တစ်ချို့ Business ဌာနတွေမှာ ဈေးကွက်ကရှိပြီသား Existing Professionals တွေထက်… အတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေနဲ့… လူငယ်တွေနဲ့ သွေးသစ်လောင်းချင် အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်…
နေရာမှာ non experience fresh graduate တွေအတွက် … ကိုယ်အတွက် လစာ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာထက်… ငါဒီနေရာမှာ အလုပ်လုပ်ရင် ဘာအတွေအကြုံတွေရမလဲ.. ဘာ Skill set တွေ လေ့လာလို့ရမလဲ… ငါရဲ့ Career လမ်းကြောင်းကို ဒီအလုပ်အကိုင် ကဘယ်လို အထောက်အကူပြုမလဲဆိုတာကို ပိုပြီး Focus လုပ်သင့်ပါတယ်…
Prepare for Next Rounds? It not over yet…
အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းတွေ အတိုင်းအတာ အလျောက် နိုင်ငံတကာ မှာ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည် လည်ပတ်နေပြီဆိုပေမယ့်… COVID-19 က မပြီးဆုံးသေးပါဘူး… ဒီ Pandemic ရဲ့ consequences တွေက အများကြီး ထပ်လာဦးမှာပါ…
အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့… ကိုယ်ရဲ့ မိသားစု ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ အတွက် အရေးပေါ် ချေးငွေတွေရယူတာတွေ… ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ရောင်းချပြီး ငွေပေါ်အောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့ case တွေ ရှိပါတယ်… ဒါတွေက အကြိမ်တိုင်းတော့ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သလို… ကြာလာရင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကုန်ပြီး အကြွေးပတ်လည်းဝိုင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်…
COVID-19 ကြီးကျော်လွန်သွားရင်တောင်မှ နောက်တစ်ချိန်မှာ ကြုံတွေရနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအတွက်… အခုကထဲက စပြီး ပြင်ဆင်ထားဖို့သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်…
အခု အချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အခြေခံပြီး ဘာတွေကြိုပြင်ဆင်ထားရမလဲ…
ကိုယ်အတွက် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Risk တွေကဘာတွေလဲ…
မထင်မှတ်ထားတဲ့ Risk တွေအတွက်ကော ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ…
Insurance လုပ်မလား Hedging လုပ်မလား… Derivatives Market မှာ Investment လုပ်ထားမလား…
လုပ်ငန်း နဲ့ လုပ်ငန်းပေါ်မှာ မှီခိုနေတဲ့ မိသားစုဘဝတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ Business Continuity Plan တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ…
နောက် Preparation Expense တွေ ကိုကော ဘယ်လို handle လုပ်မလဲ နဲ့ နောက်ဆုံး ဘယ်အချိန်မှာ give up လုပ်ပြီး နောက်ထပ် Plan B ကို ဘယ်လိုစမလဲ ဆိုတာ အထိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ Working Professionals များ၊ ကျောင်းလူငယ်လူရွယ်များအတွက် သင့်တော်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဗဟုသုတရရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာများကို အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ Matrix Institute of Professionals pageလေးကို Like & Follow လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်…